Somaliland News : Somaliland - Xarunta Xuquuqal Insaanku way canbaaraynaysaa xukunka ku dhacay boqor Buurmadow
Rafcaan uu qaatay ayay Maxkamadda Rafcaanku dhegaysatay 10 kii iyo 12kii May.
Taariikhdu markay ahayd 26th April 2018, Maxkamadda Gobolka Hargeysa oo uu gudoominayo garsoore Axmed Dalmar Ismaaciil waxaay shan sanadood oo xadhig ah ku xukuntay Boqor Cismaan aw Muxumued Buur madow oo ah hogaamiye dhaqameed caan ah.
Maxkamadda rafcaanku maanta waxaay ayiday xukunkaas inkasta oo ay xadhigii ka dhigtay 3 sanadood, halkii uu markii hore ka ahaa 5 sanadood.
Waxa lagu eedeeyey “Ceebayn Qaran (qodobka 219 ee Xeerka Ciqaabta), iyo “faafin war been abuur ah (qodobka 328), iyo af-lagaado garsoor.
Xukunka Maxkamadda Gobolka ee rafcaaku ayiday wuxuu si cad u baal maray hanaanka dacwad qaadista caddaaladda ah. Waxa loo diiday inuu qareen yeesho inkasta oo uu marar badan codsady, iyo inuu u diyaar garoobo difaac. Waxa maxkamadda gobolku ay dhegaysatay oo keliya xeer-ilaalinta ka hor intaanay xukunka soo saarin.
Xorriyadda hadalka waxa damaanad qaaday qodobka 32aad ee dastuurka Somaliland iyo qodobka 19aad ee Baaqa Caalamiga ah ee Xuquuqal Insaanka.
16ka April 2018 waxa Maxkamadda gobolka ee Hargeysa ay ku xukuntay Maxamed Kayse Maxamuud 18 bilood oo xadhig ah oo ay kaga xukuntay qoraal uu Facebook ga ku qoray.
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxaay ka codsanaysaa dawladda Somaliland inay xorriyadooda u soo celiso Boqor Buurmadow iyo Maxamed Kayse Maxamuud.
Gudoomiyaha Xarunta Xuquuqal Insaanka, Hargeysa Somaliland